UKomphela uvikela uKatsande ngokushweba iphenathi | News24
UKomphela uvikela uKatsande ngokushweba iphenathi
Cape Town – Umqeqeshi weKaizer Chiefs, uSteve Komphela, uyavuma ukuthi ezakhe ngabe ziziwinile kakula nje emdlalweni womkhaya nalapho bezitholene khona phezulu nezimbangi ezinkulu i-Orlando Pirates, kodwa wanqaba ukugxeka uWillard Katsande ngokuthi uyena obenzele phansi.
UKatsande ubelokhu eyingxenye yeqembu leChiefs kumasizini amathathu edlule kanti usebe nguKaputeni kaningana uma engekho uSiphiwe Tshabalala kanye no-Itumeleng Khune.
Lo mdlali weqembu lesizwe eZimbabwe ushwebe iphenathi ebalulekile ngomzuzu ka-82 nokwenze umdlalo wagcina uphele zibambene ngo-1-1 ngemuva kwegoli lokuvula laJoseph Molangoane kanye nomkhonto ogwaze ekhaya kaTsepho Masilela ngomzuzu ka-32.
OLUNYE UDABA: Ngifuna ukuxoxela abazukulu ukuthi sashaya iChiefs - Jonevret
“Besingawunqoba lo mdlalo, umuntu kumele akhulume iqiniso elimsulwa, yize noma bekunezingozi eziningi.
“Mayelana nomphumela womdlalo, senze kahle. Sikhombisile ukuthi sifuna ukuwina umdlalo, kodwa besingenawo umuzwa wokunqoba. Iphenathi okumele uyithathe.
“Kodwa abadlali bayawashweba amaphenathi, uyishwebe nje ngesikhathi esimbi futhi uya ekhaya kungu-1-1, ujabulile ngemiphumela? Awukwazi ngoba lona yilona obekukumele uwuwine,” kusho uKomphela egcizelela ngokuthi amathuba afana nalawa kumele uwasebenzise nakanjani.
Emdlalweni olandelayo iChiefs izobhekana neStellenbosch FC ne-Athlone Stadium kumqhudelwano we-32 Nedbank Cup ngesonto, ngoMashi mhlaka-12.